ကျွန်ုပ် ကြုံခဲ့သော ဆာကမ်စီးရှင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်ုပ် ကြုံခဲ့သော ဆာကမ်စီးရှင်း
ကျွန်ုပ် ကြုံခဲ့သော ဆာကမ်စီးရှင်း
Posted by မောင် ပေ on Feb 22, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 27 comments
တစ်ရက်ကပေါ့ဗျာ ။ အသိ ချာတိတ်တစ်ဘွေ ဆေးခန်းသွားမလို့ တဲ့ ၊ အဲဒါ အဖော်အဖြစ် လိုက်ပေးဖို့ ခေါ်တာနဲ့ ၊ သူ့ ကားနဲ့ အတူ လိုက်သွားပေးမိတယ် ။ အထူးကု ဆေးခန်းကြီးပေါ့ဗျာ ။ ဟိုရောက်မှ သိရတာ ချာတိတ်က ရှင်ပြုမလို့ တဲ့ဗျ ။ ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာ ယောက်ျားလိင်တံ က အရေပြား ကို ဖြတ်တာပေါ့ဗျာ ။ ချာတိတ် က မုဆိုးမသားဆိုတော့ ၊ သူ့ အမေ က ဒါမျိုးတွေ လုပ်ပေးရကောင်းမှန်း ဘယ်သိမလဲ ။ ချာတိတ်က ကျုပ် ကို အဖော်ခေါ်ပြီး ချာတိတ်က ခွဲစိတ်ခန်း ဝင်သွားတာဗျ ။ ချာတိတ်လို့ သာ သုံးရတယ် ။ သူ့ အသက်က ၂၀ကျော်ပေါ့ ။ ကျုပ်လဲ ခွဲစိတ်ခန်းအပြင်ဘက်မှာ ချပေးထားတဲ့ ထိုင်ခုံတွေမှာ ဂျာနယ်ဖတ်ရင်း ထိုင်စောင့်ရတာပေါ့ ။ တစ်နာရီ နဲ့ ၅မိနစ်လား ၁၀ မိနစ်လား ကြာတယ်ဗျ ။ ချာတိတ် ခပ်ပြုံးပြုံး ၊ ကွတ ကွတ နဲ့ ခွဲစိတ်ခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာတယ် ။ ကျုပ် လဲ သူ့ နားပြေးသွားပြီး တွဲလမ်းလျှောက်ပေးရမလား ဆိုတော့ ၊ ရတယ်တဲ့ဗျ ။ သူ့ ဟာသူ လျှောက်နိုင်တယ် ။ အဲ့မှာ ထိုင်ခုံမှာ ခဏထိုင်စောင့် ၊ ခဏနေကြတော့ သူ့ ကို ခွဲစိတ်ပေးတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးဆီမှာ ခဏဝင်စကားပြော ၊ ဆေးခန်းက ငွေရှင်းကောင်တာ မှာ သောက်ဆေးတွေယူ ၊ ပိုက်ဆံ ရှင်းပြီး ၊ ချာတိတ်ကား ကို ကျုပ်ကမောင်းပေးပြီး ပြန်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ ။ တစ်လမ်းလုံး ကျုပ်မှာ သူ့ ကို မေးစရာစကားတွေ နဲ့ ကို ပလုံစီနေခဲ့တာဘဲ ။ သူ က လဲ ပြောပြချင်နေတဲ့ကောင် ဆိုတော့ ၊ လဘက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဝင်ထိုင်ပြီး ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ် ဗျ ။ ဆာကမ်စီးရှင်းအကြောင်း ဒီရက်ပိုင်းတွေ အတွင်း ဂျာနယ်အချို့ မှာ ရေးလာတာကို သူဖတ်ရတဲ့အကြောင်း ။ သူ က ဒီအကြောင်း ကို သိနေခဲ့တာကြာပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ။ ဘာလို့ သိကတဲက မလုပ်ခဲ့တာတုန်းဆိုတော့ ၊ အသားနာမှာ ကြောက်တာရယ် နဲ့ ၊ ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ရင် နာ့စ်မလေးတွေ အကူကောင်မလေးတွေ ကို သူ့ ရွှေပန်း ပြရတော့မှာ ကို ရှက်တာတစ်ကြောင်း တဲ့ဗျ ။ အခုမှ ဘယ်က ဘယ်လို သတ္တိရှိသွားတာလဲ လို့ ထပ်မေးတော့ ၊ သိပ်မကြာသေးခင် က သူ့ ပါတနာ နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အချိန် ၊ သူ့ လိင်တံထိပ်က ပြဲသွားသတဲ့ ။ သူ့ လိင်တံရဲ့ပုံစံ ကို လဲ ပြောပြတယ် ။ သူ့ လိင်တံ အရေပြားက အနဲငယ် ရှည်နေပြီးတော့ ၊ သူ့ လိင်တံထိပ်နဲ့ အရည်ပြားနဲ့ က ကပ်နေတာတဲ့ဗျ ။ ဆိုတော့က လိင်ဆက်ဆံတော့မယ်ဆိုရင် ၊ သူ့ လိင်တံအရေပြားကို ဆွဲလှန်ပြီးမှ ပြင်ရတော့တာပေါ့ဗျာ ။ ခါတိုင်းမပြဲဘဲနဲ့ ၊ အခုမှ ဘာလို့ ပြဲတာတုန်းလို့ မေးလိုက်တော့ ၊ သူလဲ မသိဘူးတဲ့ ။ ခါတိုင်းတော့ အဆင်ပြေပါတယ်တဲ့ ။
အပေါ်က ပုံလေးတွေကတော့ ဂူးဂဲထဲကနေ ရှာလို့ ရတာလေးတွေပါဗျာ ။
ဝီကီပီဒီယား ထဲ မှာတော့ ဒီလို ရေးထားတယ်ဗျ
“Male circumcision is the surgical removal of some or all of the foreskin (prepuce) from the penis.”
အဲဒါတွေ က တော့ ဒေါက်တာတို့ ၊ ဆေးပညာနားလည်သူတွေ ပိုသိမှာပေါ့ဗျာ ။ သူရို့ တွေ ထပ်ရေးပါလိမ့်မယ် ။ ကျုပ်ကတော့ ကျုပ် ကြုံခဲ့တာဘဲ ဆက်ရေးမယ် ။ အရပ်ဖြစ်လေးပေါ့ဗျာ ။
အပေါ်က ချာတိတ်နဲ့ ဇါတ်လမ်းကို ဆက်ရရင်ဗျာ ။
သူ့ လိင်တံ ပြဲသွားတဲ့အခါကြတော့ ၊ သူလဲ ကြောက်ပြီတဲ့ ။ နောက်တစ်ခါ ထပ်ဖြစ်မှာကိုး ။ ချာတိတ် က သားအမိ နှစ်ယောက်ဘဲ ရှိတာ ဆိုတော့ ။ တိုးတိုးတိတ်တိတ် အသိတွေထဲကို လိုက်မေးတော့ ၊ အခုခွဲပေးလိုက်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီး ကို သိလာရတာတဲ့ ။ ဒါနဲ့ ထိုင်တဲ့ဆေးခန်းမေး ။ ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ ၊ ရက်ချိန်းယူပြီးတော့မှ အဖော်ခေါ်စရာ လူကလဲ မတွေ့ ၊ အဲဒါနဲ့ ကျုပ် ပါသွားခဲ့တာပေါ့ဗျာ ။ ခွဲစိတ်ခန်းထဲမဝင်ခင် တောရှင်းရတယ်တဲ့ဗျ ။ ယောက်ျားနာ့စ် လား အကူကောင်လေးလား မသိဘူးတဲ့ ။ သူ့ ကို အခန်းတစ်ခုထဲ ခေါ်ပြီး တောရှင်းပေးသတဲ့ ။ တောရှင်းတယ်ဆိုတာ လိင်တံကအမွှေးတွေနဲ့ လိင်တံဘေးပတ်လည် ဆီးခုံတစ်ဝိုက် က အမွှေးတွေ ရှင်းရတာပေါ့ဗျာ ။ ဟိုက ပိုက်ဆံမတောင်းပေမယ့် သူက အလိုက်တစ်သိ နဲ့ မုန့် ဖိုးပေးလိုက်တယ်တဲ့ ။ အဲဒါပြီးတော့ ၊ သူ ဝတ်ခဲ့သမျှ အင်းကျီ ပုဆိုး အကုန်ချွတ် ၊ ကိုယ်တုံးလုံး နဲ့ခွဲစိတ်ခန်းဝတ်စုံ ကို ဝတ်ရသတဲ့ဗျ ။ သူပြောမှ ပြန်ကြည့်တော့ ၊ ခါတိုင်း ဂျင်းဘောင်းဘီ ဝတ်နေကျ ချာတိတ်က ပုဆိုးနဲ့ ဖြစ်နေတာကလား ။ ဒါမှ ခွဲစိတ်ပြီး အဆင်ပြေမှာကိုး ။ ခွဲစိတ်ခန်းထဲ ရောက်တော့ သူ ဝတ်ထားတဲ့ ခွဲစိတ်ခန်းဝတ်စုံ ကို အောက်ကနေ အပေါ်ကို မတင်လိုက်သတဲ့ ။ ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာ လဲ အကူမိန်းခလေးတွေ ၊ နာ့စ်မလေးတွေ နဲ့ ၊ ထုံဆေးအထူးဆရာဝန်မကြီး ဘဲ ရှိသေးသတဲ့ ။ သူ့ ခဗျာ ပြောရင်းနဲ့ ကို မျက်နှာတွေနီလာတယ် ။ ဟားဟား ။ အေးပေါ့ဗျာ ။ ရှက်စရာကြီးပေါ့ ။ သို့ ပေသည့် ကျန်းမာရေး က အရေးကြီးတယ်တဲ့ ။ သူ မရှက်သလို နေရတာပေါ့တဲ့ ။ ခဏနေကြမှ ဆရာဝန်ကြီး ရောက်လာပြီး ချက်ချင်း လုပ်ငန်းစဖို့ ပြင်တယ်တဲ့ ။ သူ့ လိင်တံ ကို ထုံဆေး ထိုးပေးပြီး ၊ ဘာမှ မကြောက်ဖို့ ပြောတယ်တဲ့ ။ အားလုံးကောင်းသွားမှာပါ ။ ပုံလှလှလေး ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါမယ်လို့ ပြောလို့ သူ့ မှာ အားတွေ ရှိသွားသတဲ့ ။ ဒါနဲ့ အံကြိတ်ပြီး ခွဲစိတ်တာ ကို ခံပါသတဲ့ ။ ထုံဆေး ၇ လုံးလောက် ထိုးရတယ် လို့ မှတ်တာဘဲတဲ့ ။ ပထမဆုံး ထိုးတဲ့ ထုံဆေး တုန်းကဘဲ နာတယ်တဲ့ ။ နောက်ကြ အေးဆေးဖြစ်သွားသတဲ့ ။ အရမ်းကြီး နာတာမျိုး မရှိတော့ပါဘူး တဲ့ ။ အဲဒါပြီးတော့ ကျုပ် အစက ရေးခဲ့သလိုဘဲပေါ့ ။ ကွတကွတ ပြုံးစစ နဲ့။ အခုတော့ သူ လဲ အိုခေဖြစ်သွားပါပြီ ။ ခွဲပြီးသုံးရက်တော့ ရေလုံးဝ မထိအောင် နေရတာတော့ ရှိတာပေါ့ ။
အခုရေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ က တော့ ကျုပ် လိုက်အားပေးခဲ့တဲ့ ဆာကမ်စီးရှင်း ပေါ့ဗျာ ။ ကျုပ် က ဆရာဝန် မဟုတ်တော့ ဆေးပညာလိုတော့ မရေးတတ်ဘူးပေါ့ဗျာ ။ အဲ့ချာတိတ် နဲ့ ပြန်လာပြီးတော့ ကျုပ် အသိ အစိုးရဝန်ထမ်းဆရာဝန်တွေ ကို သွားမေးကြည့်တော့ ၊ လိင်တံ ဟာ အော်ရဂျင်နယ် အပွင့်မဟုတ်ရင် လုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဘဲ တဲ့ ။ သူရို့ ဆေးရုံကိုလည်း မကြာခဏ ဆိုသလို ၊ အိမ်ထောင်ရှင်တွေပြေးလာပြီး ခွဲပေးရတာတွေ ရှိတယ်တဲ့ ဗျ ။ လင်မယားနှစ်ယောက် ဆက်ဆံနေကြရင်း ၊ လိင်တံအရေပြားက ရှည်ကရှည် ၊ မဖြတ်ရသေးတော့ ၊ ဆက်ဆံတဲ့အချိန်ကြ အရေပြား ကို အနောက်လှန်ထားကြတာဆိုတော့ ၊ အရေပြား က လိင်တံ ကို ဇွတ်ညှစ်ထားသလို ဖြစ်ပြီး ( သရေကွင်းအသေစီးထားသလို ) အတော်ခံစားရခက်ကြတယ်တဲ့ ဗျာ ။ နောက်ပြီး အရေပြားရှည်နေတာ ကို မဖြတ်ဘဲထားမယ်ဆိုရင် လိင်တံကဂျေး(ချေး)တွေဟာ အဲ့အရေပြားကြားမှာ သွားစုပြီး ကြာရင် ဒုက္ခအကြီးအကျယ်များမယ်တဲ့ ။ လိင်တံထိပ်အရေပြားရှည်နေတာ ကို မဖြတ်ဘဲ နေခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားများ အနေနဲ့ ဖြတ်သင့်ပါတယ်လို့ လဲ သိခဲ့ရပါတယ် ။ နောက်ပြီး ဆက်ဆံဖော်များတဲ့ သူဆိုရင် ၊ အဲဒီအရေပြားမှာ sextually transmitted diseases STD လို့ ခေါ်တဲ့ ရောဂါပိုးပေါင်းစုံ ကူးစက်တာတွေ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်မားပါတယ် တဲ့ဗျာ ။
ဆိုတော့ကာဗျာ လိင်တံအရေပြား ရှည်နေတဲ့ အမျိုးသားတိုင်း အရေပြားဖြတ်ထားသင့်တယ်လို့ ကျုပ် က ပြောချင်တာပါဘဲ ။ ဒီအကြောင်းကို မသိသေးတဲ့လူတွေ ကို သိအောင်ဖြန့် ဖို့ နဲ့ ၊ ဒီကိစ္စလုပ်တာဟာ အရမ်းနာကျင်တဲ့ ကိစ္စမျိုးမဟုတ်တဲ့ အကြောင်း ကို လူသိများလာအောင် မန်းတလေး ဂေဇက်ကနေ ကျုပ်တို့ က ဆောင်ရွက်ကြရမှာပေါ့ဗျာ ။
ကျန်သွားတာ တစ်ခုကတော့ ၊ ချာတိတ် သွားခဲ့တဲ့ အထူးကုဆေးခန်းကြီးမှာ ၊ ဒီကိစ္စအားလုံးအတွက် ကုန်ကျငွေဟာ တစ်သိန်းကျပ် မကုန်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ဗျာ ။ အထူးကုဆေးခန်းမတက်နိုင်တဲ့သူများအတွက် ဆိုရင်ကော ဆိုတော့ နီးစပ်ရာပြည်သူ့ ဆေးရုံများမှာလည်း စရိတ်မျှပေး နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာနဲ့ ခွဲစိတ်လို့ ရပါသတဲ့ဗျာ ။ ချာတိတ်တက်ခဲ့တဲ့ အထူးကုဆေးခန်း နဲ့ ဆရာဝန်ကြီးကိုတော့ ၊ ကြေငြာဝင်ရာရောက်မှာစိုးလို့ နာမည်တွေ လိပ်စာတွေ ထည့်မရေးတော့ပါဘူးဗျာ ။ သိချင်တဲ့သူများရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ၊ ဂေဇက် ဖိုရမ် က ပရိုက်ဗိတ်မက်ဆေ့ ကနေ ကျုပ်ဆီ ကို လှမ်းမေးနိုင်တဲ့အကြောင်း ပြောရင်း ၊ စာသိမ်းလိုက်ပါတယ်နော ။
အဟိ ဘာများလဲလို. ဒီိလူကြီးတော်တော်နောက်တယ်…
လုပ်သင့်ပါတယ်ကျနော်.အမြင်တော့…. ကြားဖူးတာကတော့လိင်နဲ.ပတ်သတ်တဲ.ရောဂါတွေကို ဘယ်နှရာခိုင်နှူန်းဆိုလာလျော့ချနိုင်တယ်ဆိုပဲ…. ဘတ်လက်ဘတ်လက်မဖြစ်နေတော့ဘူးပေါ.
မန့်၇တာလဲခပ်လန်.လန်. ရွာထဲကမဒီလေးတွေက… ကိုဂီ့နှူးဘာဂိုဏ်းသားထင်နေကြရင် ဒုက္ခ
တကယ်လို့များသေချာသိတဲ့လူများရှိရင် advantage ကဘာတွေ disadv; ကဘာတွေဆိုတာသေချာလေး
ပြရဲ ဘူးနော်။ကိုယ်တိုင်တောင် မကိုင်ရဲဘူး။
ဖြတ်ဖို့နေနေတာတာ ဆေးထိုးအပ်နဲ့အထိုးခံရမှာကိုကြောက်တယ် ကိုပေရေ
စိန်ပေါက် ဖြတ်မလား ကိုပေက free တဲ့
ရုရှားနိုင်ငံမှမှာယူတင်သွင်းသော ခေတ်မီ ဇာဘုရင်ခေါင်းဖြတ်စက်အခြေခံ စင်တီမီတာနည်းဖြင့် အတိအကျဖြတ်တောက်ခြင်း…
ဖြတ်တောက်ပြီး ပြန်လည်ချုပ်ရာတွင် ညီညာသပ်ရပ်မှုရှိစေရန် ဓားစက်လိုက်ပေးခြင်း…
ကွန်ပျူတာ ပန်းထိုးပေးခြင်း၊ စီးကွင့်ထိုးပေးခြင်းစသည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို နေချင်းပြီး
အောင်မလေးလေး ကိုကြက်ဖောင် သများစီးပွားတုတ်နဲ.လာထိုးပြန်ပြီ
ကိုယ်ဟာကို အင်တာနေရှင်နယ် တောက်တိုမယ်ရ IT လုပ်တာ စိတ်ချမ်းသာပါတယ်.. အဲဒီအလုပ်ကြီးတော့ မလုပ်ပါနဲ.ဗျာ.. နေ.တိုင် အဲဒါကြီးတွေ ကိုင်နေရမှာ အမငီးးး ပြောရင် ကျောချမ်းထာ…..
ဟဲ့ဟဲ့ ဒီကောင်မက အစောတည်းက၀ါသနာထုံတာ……ဒီအလုပ်ကိုပြောင်းလုပ်ပီဆိုတော့ အလုပ်ဖစ်ပီပေါ့……..ဒီကောင်မှ အကိတ်လေးတွေကို အလွယ်တကူရှာတွေ့ချင်တာဖြစ်မယ်…. ဟွန်း အကြံလည်း တယ်ကြီးတာကိုး….. ဟွန်း…. လူဆိုးမကြီး ရွှေတိုက်……….
အေးအေး ကောင်မ မိဖရဲ. နင်တော့ ငါမန်းလေးလာရင် အကုန်ပါအောင်ကို ဖြတ်ပစ်မယ် ဟွန်း
ကိုပေ နေမကောင်းဘူး ဆို နေကောင်းသွားပြီလား
ကိုပေ နေမကောင်းဘူး ဆိုတာ…….
ကိုပေ ရေးတာ အတော်ပဲ ဗျ
ကျွန်တော့်သား အငယ်ကောင် ၆ နှစ်လောက်က လိင်တံထိပ်မှ ချေးလေးတွေ ရှိနေတယ်
အခုလောလောဆယ်တော့ ရေဆေးပေး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရတယ် အကုန်တော့ မပြောင်ဘူး
တခြားကလေးတွေ ရော အဲဒီလို ဖြစ်ကြလား
ထိပ်ကို တဖြေးဖြေးလှန်သွားရင် ထိပ်ကလန်သွားပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဘို့လွယ်မယ်ထင်တယ်
ဘယ်အရွယ် အငယ်ဆုံး ရှင်ပြုလို့ ရလဲ
ကိုပေ သိရင် ပြောပြ ဗျာ ၊ ရွာထဲက တခြားသိတဲ့သူတွေလဲ ပြောပြပါဦး
မိန်းကလေးတွေ ဖတ်မိရင်လဲ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ မို့ မှတ်သားသွားကြပေါ့ ဗျာ
နောင် သား မွေးလာရင် အသုံးတည့်တာပေါ့
ကလေးခွဲစိတ်အထူးကုပါမောက္ခဦးထူးဟန်ပြောတာတော့ တစ်နှစ်ခွဲလောက် နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပြောတာပဲ။
ကျွန်တော့ကလေးတုန်းကတော့ သူနဲ့ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။
ဦးပါလေရာ ရှင်းပြတာ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ
သိချင်တာက တချို့ ယောင်္ကျားလေးတွေ ဒီလိုပဲ ဆွဲလှန်ရင်း နဲ့ လန်သွားပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်လို့ လွယ်သွားတယ် ဖြတ်တဲ့ အဆင့် လုပ်စရာ မလိုတာရှိတယ် ၊ အဲဒါမျိုးက ယောင်္ကျားလေးတိုင်း လုပ်လို့ မရဘူးလား
တချို့က တော့ အဲဒီလို မလန်ဘူး မဖြစ်မနေဖြတ်ရမယ် ဆိုတာမျိုး ဆိုရင်တော့ လဲ ဖြတ်ဘို့ စီစဉ်ပေးရမှာပေါ့
အဲဒါ တချို့က ငယ်ငယ်ကတည်းကလုပ်ပေးလိုက်ကြတယ်။
တချို့ကတော့လဲ နာတာ ရောဂါပိုးဝင်တာ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ဘာမှပြဿနာမရှိရင်ဆယ်နှစ်ကျော်မှ လုပ်ပေးကြတယ်။
လက်တွေ့မြင်ဘူးတာတော့ ကြီးမှလုပ်ရင် ပိုက်ဆံလဲအကုန်သက်သာ မြန်မြန်လဲ အနာကျက်တယ်။
လူကြီးဖြစ်မှ လုပ်ရင် ပိုက်ဆံသက်သာအောင် လွယ်လွယ်နေရာမရွေးမလုပ်မိဘို့လိုတယ်။
ညီလိုခင်တဲ့တယောက် တွေ့တဲ့ဆေးခန်းလေးမှာလုပ်တာ ပိုးဝင်အနာမကျက်ပဲ ဆေးရုံတက်ကုလိုက်ရသေးတယ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ လိုအပ်လို့ပဲရှိနေတာမဟုတ်လား?
လိင်တံဖုံးအရေပြားဆိုတာလဲ လိုအပ်လို့ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ရမှာမဟုတ်လား။
အဲဒါခွာလိုက်တော့ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသဘောလဲမသိ ?
ရွာ့ဆရာဝန်နဲ့ ဆုံဖြစ်မှ မေးမြန်းကြည့်ရဦးမယ်။
ကျုပ်တို့ကိုနိုဇိုမိတို့ကိုချောတို့ တောင် စိတ်ပူနေတာ..
ကိုရင်စည်ကလဲ ဖဲရိုက်ဖို့ တာဆူနေပြီ
သူပြောတော့ “အသိ ချာတိတ်တစ်ဘွေ” ဆို။
လုပ်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ …
ဒါပေသိ ..ပုံမှန် သဘာဝအတိုင်း လူပျိုဖြစ်သွားပြီး
ကျန်းမာရေး အခြေခံ အသိလောက် ရှိတဲ့ လူ
(ရေမှန်မှန်ချိုး …သန့်သန့် ရှင်းရှင်း ထားတဲ့ လူ) အတွက်ကျတော့လည်း
ဒါ အပိုကိစ္စဂျီးခည …
(ဆန်ဆရီ ဆဲလ်) တွေ တပုံတပင် ပါဝင်နေလို့
မလိုအပ်ဘဲ ဖြတ်ပစ်ရမှာ …နှမျောဇယာ ……
ကြာပါတယ်ဂျာ ..သဂျီးကို poll လုပ်ခိုင်းပါလား ..
အချို့ ကိစ္စတွေကြတော့ ၊ သဘာဝ ကို လွန်ဆန်သလို ဖြစ်နေပေမယ့် လုပ်ရတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေ ရှိတယ် ။
ဥပမာ ဆိုရင် ရင် အံဆုံး(သွား) ကန့် လန့် ပေါက်တာမျိုးပေါ့
အံဆုံး ဟာ အရွယ်မရွေးပေါက်တတ်တယ် ။ သူ့ ရဲ့ ဖန်ရှင်း က ဘာလဲ ဆိုရင် ဘာမှ မရှိဘူး ။
ဖန်ရှင်မရှိလို့ ဘာမှ မဟုတ်ဘူးတော့ မထင်နဲ့ ။ ပုံမှန်အတိုင်း မပေါက်ဘဲ ၊ ကန့် လန့် ပေါက်လာရင် ၊ အစာ ဝါးစားတဲ့အခါ ဒုတ်ခ ပေးပြီဘဲ ။ အဲ့ခါကြ နှုတ်ပစ်လိုက်ရသလို ပါဘဲ ။
ဆာကမ်စီးရှင်း ဆိုလို့ ဘာကြီးများလဲလို့၊ ဖတ်၏၊ မှတ်၏။
ဟုတ်တယ်၊ဒါကျန်းမာရေးအရလုပ်သင့်တယ်၊ ကျုပ်အထက်နှစ်ယောက်မြောက်အစ်ကိုတုန်းကဆို ၊သူဆီးသွား
ရင် ထိပ်မှာပူစီပေါင်းလိုနေတာအရေပြားက၊ပြွန်ထိပ်အုပ်ပြီးအပေါက်မရှင်းလင်းတာ၊အဲဒါ အရေပြားဖြတ် လိုက် မှ လူစဉ်မှီပြီး၊လွှတ်ကောင်းဆိုပဲ။
တစ်ချို့က၊ ကုလားဘာသာအယူဆိုမလုပ်ကြဘူး၊တစ်ကယ်တော့ အဲလိုလုပ်ထားရင်၊ လိုင်တံလွတ်လပ်စွာကြီး
ထွား၊ရှည်ဘို့အားပေးသတဲ့ဗျား။(ငယ်စဉ်ကတည်းကလုပ်မှပြောဒါ) ၊ခုပြေးလုပ်လို့ကတော့ ဟင်း ဟင်း ဘယ်ရ မလည်း၊ အရေပြားဆုံးတာအဖတ်တင်တော့မပေါ့။
အရေပြားဆုံးတာတင် မဟုတ်ပါဘူး ဘကြီးရယ်
ထိပ်ဖျား ပြဲခြင်း ၊ နာခြင်း ၊ ထိပ်ရှည်နေသော အရေပြားက လိင်တံကိုပြန်စွပ်ကာ အတင်းဖြစ်ညှစ်သလို ဖြစ်ခြင်း စတဲ့ ဘေးတွေကလဲ ကင်းစေပါသတဲ့ ခင်ဗျာ
ဘယ်လို ပို့ စ်ပါလိမ့်။
ဖတ်ရတာ တညိုးကြီးနော် ။
ဒါပေမယ့် သေချာ ကျကျနနရေးထားတော့ လည်း စိတ်ဝင်စားစ၇ာပါပဲ။
နောက်ကိုလည်းရျာရှာဖွေဖွေ လေးတွေ.ရေးတင်ပါဥိး ။
အလို ရွာသူတွေ တယောက်မှ မရှိဂျဘာလား…။ ထင်မြင်ချက်လေးများ ပြောဂျပါအုံး..ပုံကြတော့ ကြည့်သွားပြီး….နောက်တာ..ဂယ်ပြောတာ…
များတို့ အကျိုဂျီးတွေ..ဒါမျိုး မကြားဝံ့ပေါင်..ရှက်ရှက်..
ကိုဟာရူမိုတို ရေ ၊ ကိုယ်တိုင် ဝင်ပြီး ကပြအသုံးခံနိုင်ကြောင်း ရယ်ပါခင်ဗျ
အဲ့သည်ငတိကိုကြည့်ရတာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကိုယ့်ဟာကိုယ်တစ်ခါမှမကလိဖူးဘူးထင်တယ်
ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ ဘသားချောတွေရဲ့ မိမိပစ္စည်းမိမိစူးစမ်းခြင်းသဘောဘဲလေဗျာ
ကျုပ်အသက် ရှစ်နှစ် ကိုးနှစ်လောက်ကတည်းက
ထိပ်လန်ဂေါင်းပြောင်အောင် ကိုယ့်ဘာသာ ကလိပြီးသွားတော့
အရွယ်လေးများရောက်လာတော့ တိုက်ပွဲဝင်ဘို့ အဆင်သင့်
မလေး ချက်ခြာဂျီး အပျိုကြီးတွေ မဖတ်ကြပါစေနဲ့
ချက်လွန်းလို့ မျက်နှာကို လက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြီးပြေးပြီ … ကိန်ကိန်ကိန်
မေးခိုင်ပိုးဝင်ပြီး မဂိခဲ့တာ ကံကောင်းသဗျာ
နို့ မိုဆို ၊ သည်ပို့ စ်မှာ အခုလို ကွန်မင့်လာရေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးနော
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘရာဗို ပါ ကိုပု